गुडिया बनाएर राम्रो आम्दानी • Anumodan National Daily
गुडिया बनाएर राम्रो आम्दानी
प्रकाशित मिति : 26th November 2018
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ जालीकी रिता मगरातिले गुडिया बनाएर गुजारा चलाउन थालेकी छन् ।
६ नम्बर वडा कार्यालयले गतवर्ष आयोजना गरेको ५ दिने गुडिया बनाउने तालीम लिएकी रिताले पसल राखेर गुडिया बनाउन थालेकी हुन् । पहिलेदेखिmनै टेलरिङ गर्दै आएकी रिताले गुडिया बनाउन थालेपछि झन् फाइदा भएको बताइन् ।
‘सिलाई भन्दा गुडिया बनाउनमा फाइदा बढि छ,’ रिताले भनिन्, ‘दिनमा तीन चार वटा गुडिया बनाउन सकिन्छ । एउटा गुडिया साइज हेरी डेढ सयदेखि १५ सय रुपैयाासम्ममा विक्री हुन्छ । गुडिया बनाउन थालेपछि मलाई राम्रो आम्दानी भइरहेको छ ।’
रिताले गुडिया बनाएर बेच्नुका साथै सिक्न चाहनेलाई तालीम पनि दिने गरेकी छन् । उनले १५ जनालाई तालीम दिइसकेको बताइन् । अझै पनि उनीबाट महिलाहरुले गुडिया बनाउने तालीम लिइरहेका छन् । हाल आफ्नै पसलबाट गुडिया बेचिरहेकी रिताले विभिन्न ठाउाबाट अर्डर समेत आउन थालेको बताइन् ।
गुडिया बनाउने सामान धनगढीमा सहजै पाउने गरेको छ । गुडिया बनाउने मखमली कपडा प्रति मिटर तीन सय र फाइबर प्रति किलो तीन सय रुपैयाा पाइन्छ । एक किलो फाइबर भएमा सात वटासम्म गुडिया बनाउन पुग्ने गरेको रिताले बताइन् ।
वडा नं. ६ का सदस्य महेन्द्र थापामगरले ३० जनालाई गुडिया बनाउने तालीम दिएको बताए । उनले ३० जना मध्ये रिताले पसल हालेर काम गर्न थालेको बताए । वडा कार्यालयले वडाबासीको आयआर्जन बृद्धिका लागि गुडिया, दुनाटपरी, ढकिया, ब्युटिपार्लर, कम्प्युटर तालीम दिएको सदस्य थापामगरले बताए । उनले यस वर्ष चुरा बनाउने र च्याउखेती तालीम सञ्चालन गरिने सदस्य थापामगरले बताए ।